Trump: Haddii ay Wax Dhacaan ha la Eedeeyo Xaakimka
Madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay in dadka Mareykanka in “haddii ay wax dhacaan”, ay tahay inay ku eedeeyaan xaakimka joojiyey amarkiisii ahaa in dalka laga mamnuuco dadka kasoo jeeda toddoba dal oo dadkooda ay u badan yihiin muslimiin.
Qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku yiri “Ma aamino karo in garsoore uu dalkeeni gelin karo xaalad khatar ah”.
Toddobaadkii tagay ayaa xaakim federaal oo ku sugan gobolka Washington James Robart waxa uu si ku meel gaar ah u joojiyey amarkii fulined ee madaxweyne Trump uu dalka Mareykanka uga mamnuucay qaxootiga iyo dadka kasoo jeeda dalalka Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria iyo Yemen.
Kadibna axaddii ayaa maxkmadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada San Francisco waxa ay ku gacan seertay dalab ka yimid maamulka madaxweyne Trump oo ahaa in dib loo dhaqan geliyo xayiraadda socdaal.
Mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka ayaa Trump waxa uu axaddii ku sheegay inuu Waaxda Amniga Gudaha Mareykanka ku amray inay si feejignaan leh u hubiso dadka soo galaya gudaha Mareykanka, isaga oo ku daray in “maxkamadda ay shaqadii ka dhigtay mid aad u adag”.